Thursday, 28 February 2019 14:02
Toyota Ractis အကြောင်းတစေ့တစောင်း
Mini MPV အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ Toyota Ractis ကို ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှာ Toyota နဲ့ Kanto Auto Works တို့ကပူးပေါင်းပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Thursday, 28 February 2019 09:46
ကားဝပ်ရှော့ဆရာတွေ ပြောပြထားတဲ့ သင့်ကားကို ဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၁၀) ချက်
ယနေ့ခေတ်ကားတွေဟာ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် တွေရှိနေပါပြီ၊ ပြီးတော့ ကွန်ပြူတာတွေကလည်း အားလုံးကိုချောမွတ်အောင်သွားစေနိုင်ဖို့၊ လွဲမှားနေတဲ့ အမိန့်ပေးမှုတွေကနေ ဖြစ်စေတဲ့ ကားပိတ်ခြင်းတွေ ၊ကားမောင်သူတွေကို ဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ ငြင်ဆိုနိုင်စွမ်းတွေက ကောင်းတာတွေဖြစ်လာစေဖို့အတွက် ဦးတည်နေပါတယ်။
ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ဝန်းကျင်ဖြင့် ရွေးချယ်သင့်သည့် Toyota Yaris
Toyota Sedan အမျိုးအစား ဘယ်မောင်းကားကိုမှ စီးချင်သူတွေအတွက် ၂၀၁၅ မိုဒယ်နဲ့အထက် Toyota Yaris iA က အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Toyota Yaris ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကတည်းက ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Vitz ၊ Belta ၊ Vios တို့နဲ့ အုပ်စုချင်းတူပါတယ်။
Tuesday, 26 February 2019 10:27
ဂီယာဝိုင်ကို ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာ လဲပေးသင့်လဲ
ကားတစ်စီး ပုံမှန်မောင်းနေသူတို့က များသောအားဖြင့် အင်ဂျင်ဝိုင်ကို ပုံမှန်လဲပေးလေ့ရှိသည့်အပြင် လူအများစု အင်ဂျင်ဝိုင်လဲသင့်တဲ့ အကြောင်းကိုသာ အပြောများကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဂီယာဝိုင်ကို ဘယ်အချိန်မှ လဲပေး သင့်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သိသူနည်းပါလိမ့်မယ်။
Toyota Alphard Grade ခွဲနည်း
TOYOTA ရဲ့ MPV အမျိုးအစားမှာ အ​ရောင်​ရဆုံး ဘုရင်​တစ်ပါး ဖြစ်​တဲ့ Alphard ကို NAME PLATE ​လေးကြည့်​ရုံနဲ့ ကားရဲ့ GRADE သိရမဲ့အပြင်​ 2W လား? 4W လား?7​ယောက်​စီးလား? 8 ​ယောက်​စီးလား? စတာ​တွေကို သိနိုင်​မှာပါ။
ဟွန်ဒါစီအာရ်ဗီ (Honda CR-V) ကား အမျိုးအစားကို ပြည်တွင်းက အက်စ်ယူဗီ (SUV) နှစ်သက်တဲ့သူတွေ အသုံးများပါတယ်။ ဘယ်ကားမဆို အသုံးပြုတဲ့ကီလို များလာတာ၊ မော်ဒယ်နိမ့်လာတာနဲ့ ပြဿနာလေးတွေ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ကြုံတွေ့ရမြဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဟွန်ဒါစီအာရ်ဗီကား အမျိုးအစားမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာလေးတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Friday, 22 February 2019 13:58
ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ဝန်းကျင်ဖြင့် ရွေးချယ်သင့်သည့် Toyota Vios
လက်ရှိမူဝါဒနဲ့ ကားတင်သွင်းမယ်ဆိုရင် ၂၀၁၆ မိုဒယ်နဲ့အထက် ဘယ်မောင်းကားကိုသာ တင်သွင်းခွင့် ရမှာဖြစ်လို့ Belta နေရာမှာ အစားထိုးမဲ့ကားက သူရဲ့ပုံပြောင်းဖြစ်တဲ့ Toyota Vios ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၅ နှစ် အရစ်ကျနဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ကားကို ၅ နှစ်ပြည့်ပြီး ပြန်ရောင်းရင် ဘယ်လောက်ရှုံးမလဲ?
လက်ငင်း ၂၇၂ သိန်းတန်ကား ကနဦးသွင်းငွေ- ၆၂သိန်း